Madaxweynaha Mexico oo baajiyay kulan uu la qaadan lahaa Trump - BBC Somali
Image caption Madaxweynaha Mexico Enrique Pena Nieto
Madaxweynaha dalka Mexico Enrique Pena Nieto ayaa baajiyay safar uu ku tagi lahaa Washington isbuuca soo socdo si uu ula kulmo madaxweyne Donald Trump.
Waxay ka dambeysay markii madaxweyne Donald Trump uu sheegay inay fiicaan lahayd in madaxweynaha Mexico uu iska baajiyo safarkaasi haddii Mexico aysan diyaar u ahayn inay bixiso lacagta lagu dhisayo darbiga xadka labada dal.
Dhismaha darbiga ayaa la sheegay inay ku bixi doonto $15 bilyan.
'' Haddii Mexioc aysan diyaar u ahay inay bixiso darbiga aan aadka ugu baahanahay, waxaa markaasi ila quman in madaxweynaha mexico uu baajiyo kulankii ana yeelan lahayn."Mexico ayaa sheegtay inaysan bixin doonin kharashaadka darbiga uu Donald Trump ka dhisayo xadka Mexico iyo Mareykanka.
Enrique Pena Nieto oo qaranka khudbad u jeedinayay ayaa ku gacanseyray qorshaha dhismaha darbiga isagoo intaa ku daray in ''Mexico aysan aaminsanyn dhismaha darbi''.
Donald Trump ayaa horay u sheegay in Mexico ay bixin doonto qarashaadka darbiga uu qorsheynaya inuu ka dhiso xadka.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa soo saaray warqad uu ku amrayo in la billaabo dhismaha derbiga xuduudda Mexico.
Dhismaha derbiga dherirkiisu yahay 2,000 oo meyl, wuxuu ahaa mid ka mid ah ballanqaadyadii ugu muhiimsanaa ee Trump, xilligii ololaha doorashada.
'Mexico ayaa bixineysa qarashka derbiga'
Image caption Derbiga hadda ka dhisan qeyb ka mid ah xuduudda Mexico iyo Mareykanka
Madaxweynaha Mexico Enrique Pena Nieto, ayaa la filayaa inuu booqdo Aqalka Cad, si uu Trump ugala hadlo dhismaha derbiga iyo danaha dalkiisa.
Horraantii Arbacadii, Mr Trump wuxuu sheegay in dowladda Mexico ay bixineyso dhaqaalaha ku baxaya dhismaha derbiga xuduudda.
"Waxaa jiri doono lacag ay bixinayaan. waxay noqoneysaa arrin cad, dhabcan qaab adag," ayuu yiri Trump.
Donald Trump wuxuu sheegay xilli uu wareysi siinayay TV-ga ABC, in Mexico "ay Mexico ay bixineyso boqolkiiba boqol, dhismaha derbigaas".
Balse madaxweynaha Mexico, Enrique Pena Nieto, ayaa cambaareeyay Donald Trump, wuxuuna sheegay inaysan bixineyn hal shilin xittaa.
Madaxweynaha ayaa lagu cadaadinayaa inuu joojiyo kullan uu isbuuca soo socdo la yeelan lahaa Trump.
Wuxuu sheegay inuu difaaci doono xuquuqda dadka tahriibayaasha ah, ayna yihiin meel la isaga gudbo.
Xayiraadda dalalka qaar ee Muslimiinta
Donald Trump ayaa sidoo kale la filayaa inuu shaaciyo xayiraado dhanka socdaalka ah inuu saaro todobo dal oo Afrika ah iyo qaar ka mid ah dalalka Bariga dhexe.
Dukumiinti amar ah oo ka kooban sideed bog ayaa warbaahinta loo kala diray, kaas oo ku qoran yahay xayiraadda dhanka socdaalka ah.
Waxaa ku qoran in madaxweyne Trump uu joojinayo muddo afar bilood ah barnaamijka qaxootiga ee Suuriya, iyo guud ahaan mashaariicda qaxootiga.
Sidoo kale, madaxweynaha wuxuu doonayaa inuu hakiyo fiisaha ama dal ku galka la siiyo muwaadiniinta dalal aan la magacaabin oo lagu sheegay inay amniga Mareykanka halis ku yihiin.
Qareenada arrimaha socdaalka waxay BBC-da u sheegeen inay aaminsan yihiin in dalalkaasi ay ka mid yihiin Suuriya, Ciraaq, Iraan, Liibiya, Sudan, Soomaaliya iyo Yaman.
Aqalka Cad ayaa diiday inuu faafaahin ka bixiyo dukumiintiyada, waxaana suuragal ah in is bedel lagu sameeyo ka hor intaanan la saxiixin.
Donald Trump ayaa u muuqda inuu dib fulinayo ballanqaadyadiisii xilligii ololaha ee ah in Muslimiinta uu ka mamnuucayo Mareykanka.
Sharciga waxaa qasab ah inay magaalooyiinka Mareykanka taageeraan si uu u dhaqangalo ayna u caawiyaan laamaha socdaalka ee dalkaas.
Maadaama aysan ahayn xeer rasmi ah, qaabka dhaqan gelinta ayaa suuragal ah in lagu kala duwanaayo.
Mexico iyo Trump oo isku haysta cidda bixineyso qarashka derbiga